I-rayson noflon fapric indwangu kunye nomthengisi
I-rayson engabalulekanga yelaphu kunye nomthengisi e China.
Pp Spunbond Non womluki Ilaphu
SS Non womluki Ilaphu
Medical Non womluki Ilaphu
Ukukhusela uboya begusha
Ilaphu Ukhuseleko Non womluki
Indwangu yetafile engalukanga
Sms Non womluki Ilaphu
I-Meltblown engekho yelaphu
Inaliti Punch Non womluki Ilaphu
Spunlace Non womluki Ilaphu
I-rayson yenziwe i-PP Spnbond Ilaphu elilukiweyo, i-SS engekaluki yelaphu, ilaphu elingeluki elilukiweyo, itafile ye-walves, engalukiweyo yezolimo kunye nelaphu elilukiweyo.
I-rayson engeyiyo ilaphu
I-Rayon ibophelele kuphando olungalukiyo, uphuhliso kunye nemveliso. Iimveliso zayo eziphambili ze-PP, ilaphu elilukiweyo, i-SS engaluki ilaphu, i-sms engenalo ilaphu, i-meltblown iluki, inaliti ye-piuch ilaphu kunye ne-spunlace ilaphu elingelilo ilaphu.
I-SS eluhlaza okwesibhakabhaka i-ss ye-25GR yobubanzi be-175mm yemaski
LeI-SS eluhlaza okwesibhakabhaka isetyenziselwa umaleko wokuqala wemaski. Ngokwesiqhelo bububanzi be-255mm. Ilaphu elilukiweyo le-SS lithambile, liphefumle kwaye liphile kwaye liphinde lifundwe. Kwaye le lela iblue ye-SS ebomvu eveliswe nguRayson inokuqinisekisa umgangatho.
Umvelisi wobungcali wetafile yetafile engekaluki (roll) e China
Ingubo yetafile engekaluki, ebizwa ngokuba yingubo ye-TNT, yinkitha eyenziwe kwi-polyprophenene. Ngeengcebiso ze-eco-ges, ukusebenziseka ngokulula, kunye nokuphinda isetyenziselwe ukuphinda zisebenze, ezingezizo ze-polyproplenes zisetyenziswa kakhulu kwiindawo zokutyela, iihotele, kunye nemizimba yethu enamalungu etafile engacacanga. Qengqeleka, i-TNT yeTheyibhile yeTheyibhile, isikithi sangaphambi kwetafile kunye ne-componing yendawo engaveli.
Ilaphu elithambileyo / i-hydrophilic elingacacanga
Ilaphu le-SS elingowalukiweyo lenziwe ngetekhnoloji ye-Beam ephindwe kabini. Ngaba uyayichaza inkcazo ye-hydrophilic inkcazo? Ezinye zeempawu ezingcwele zale fatri ye-SS engaphulukiyo ziphefumla, zithambile, i-hydrophilic kwaye zingabi nabungozi. Ezi ntlobo zendwangu ye-hydrophilic zisetyenziswa njengendawo engaphakathi yemaski yemaski. IRayson yi-Hydrophilic ye-hydrophilic engaluki, eneminyaka emininzi yamava atyebileyo.
Iphepha lebhedi elilahliweyo le-SS
Ilaphu le-SS engalukiweyo yindawo elungileyo yemveliso yokulala i-Shearshing Shekhi yebhedi, eyenzelwe ukusetyenziswa kweebhedi zoongikazi, iibhedi zesibhedlele, kunye neebhedi ze-SPA. Ezi zibhedeni ziyalahlwa, ziveliswa ngamaphepha amabini ebhedi, okuthetha ukuba inika isisombululo esicocekileyo kodwa esinendleko zekliniki nganye.
I-Rayoson engakhange ihlangane inkampani ye-computer yelaphu okanye umthengisi e-China uneminyaka eli-15 yamava kwimveliso engafunekiyo kwaye r&D. Inkqubo yokuLawulwa kweMigangatho esemgangathweni kunye namava otyebileyo anokuqinisekisa umgangatho ozinzileyo kunye nemveliso elungileyo
Iqela lokuthengisa elineminyaka eli-15 yamava orhwebo lwamanye amazwe linokubonelela ngeenkonzo zobungcali ngesiNgesi, iSpanish, isiTaliyane neArabhu. Iimveliso zethu zithengiswa kumazwe angaphezu kwama-40 kwihlabathi liphela.
IRayson inemigca eli-10 ebalaseleyo yokuveliswa kwelaphu, elinokuvelisa iitoni ezingama-3000 zendwangu ze-nonloven kwimibala eyahlukeneyo ngenyanga, kunye nobubanzi obukhulu be-4.2m. Iindidi zemveliso ziilaphu ezingezizo ezilukiweyo, i-SMS, i-faprics evuthayo, kwaye inaliti etyhidiweyo ye-on-fanrics e-on-lol, kwaye i-spin lace ilaphu elingengulo.
I-Onvestatory yexesha elide yempahla ye-Darw kwindawo yokugcina izinto iqinisekisa uzinzo lwamaxabiso emveliso.
I-FOSAN RAYON RAYON ANOND Co., Ltd. Ngaba i-sino-United Kimoure, esekwe ngo-2007, kwindawo edolophini yeFoshan Shisha-i-Tech, engaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka kwiVolkzHwage, eHonda, i-CMO kunye nesigqubuthelo esinzima indawo ye-80,000 yeemitha ezingama-80,000 kunye nokuqesha abantu abangama-400. Inkampani ithathe inxaxheba kwimveliso yeelaphu ezingezizo ezingezizo ezingezizo ezingezizo ezingezizo ezingezizo zelaphu, ezingengaphezulu kweepesenti ezingama-90 zeemveliso zayo ezithengiswa kumazwe angaphezu kwama-30.
I-FOSAN RAYON RAYON ANOND Co., Ltd. Ngumenzi onamathuba kwishishini elingelilo ilaphu elineminyaka yamava. Ibophelelekile kwilaphu engalukanga, yophuhliso, kunye nemveliso kwaye iphumelele imigca elishumi eliyilishumi eliphambili, ekwaziyo ukuvelisa ilaphu elilukiweyo, i-SS, i-SMS, i-MSTA Pung kunye neSPUNDLACE engalukiweyo, nge Ukuvelisa ubungakanani bobunzima ukusuka kwi-10gsm ukuya kwi-150SM ngexesha lobubanzi obu-4.2m, kunye nemveliso yonyaka enobunzima obungaphezulu kwama-36,000,000. Inkampani iyakwazi ukuvelisa amalaphu angalukiyo yemibala emininzi eyahlukeneyo kunye nobungakanani, ilungele ukusetyenziswa okwahlukileyo.